Kooxda Liverpool oo ay jug culusi soo gaartay ka hor xilli ciyaareedka cusub – Gool FM
Kooxda Liverpool oo ay jug culusi soo gaartay ka hor xilli ciyaareedka cusub
(Liverpool) 30 Luuliyo 2016 – Kooxda Liverpool ayaa isla ruxantay kaddib markii saxiixooda cusub ee Loris Karius ciyaartii saaxiibtinnimo ee Chelsea, kaasoona garoomada ka maqnaan doona muddo 2 bilood ah.
Goolhaye Karius ayaa 5 milyan oo gini ugu soo biiray kooxda ka arrimisa garoonka Anfield, isagoona ka yimid kooxda Mainz.
Waxaa la filayey inuu xilli ciyaareedka cusub ku bilowdo isagoo ah goolhayaha koowaad (No 1) ee Reds kaddib markii Jurgen Klopp uu isaga kula taliyey inuusan ciyaaraha Olympic-kada u raacin xulka Germany.
Laakiin hadda waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa labo bilood kaddib markii uu ka jabay gacanta kulankii saaxiibtinnimo ee Liverpool ay guuldarrada 1-0 kala kulantay Chelsea Arbacadii.
Goolhayaha reer Jarmal ayaa dhaawacan gaaray markii uu isku dayey inuu bixiyo karoos ku yimid, laakiin taas bedelkeeda waxa uu madaxa feer kaga dhuftay saaxiibkiis Dejan Lovren.
Waxaa loo diray Scan uu ku marayo Mareykanka, laakiin iminka waxa uu u duulay dalkiisa hooyo si uu qalliin u maro.
Karius ayaa lagu soo bilaabay kulan kasta oo ka mid ah shantii ciyaar ee saaxiibtinnimo oo ay samaysay kooxda Liverpool ilaa iminka, laakiin goolhaye Simon Mignolet ayaa u muuqda inuu dib u soo ceshtay booskiisa koowaad ee Reds xilli ciyaareedka cusub.
Chelsea vs Real Madrid, Man United vs Galatasaray, Liverpool vs AC Milan iyo kulamo kale oo saaxiibtinimo oo maanta dhacaya….(Ka bogo saacadaha la ciyaari doono)
Paul Pogba oo maray tijaabada caafimaad wax yarna u taataabtay taageerayaasha Man United